Owesifazane wanamuhla akakwazi ukuchitha isikhathi esiningi ukupheka. Kodwa empeleni ngakho kungaba isifiso sokujabulisa umndeni ngezitsha ezihlwabusayo. Ukusiza umnikazi ukuza amadivayisi amasha azokwenza ukuphila kube lula. Manje ekhishini, owesifazane angabona isitsha se-steamer, i-multivark, umenzi wesinkwa, njll. Kodwa namhlanje sizokhuluma ngesitofu sikagesi esisetshenzisiwe.
Ngubani odinga isitofu sikagesi?
Ingabe ulangazelela ukukhipha isitofu sakho segesi? Manje sekuyisikhathi sokwenza. Isitofu segesi seluphele. Kwathathwa indawo yokufakelwa kagesi. Leveli entsha yasekhishini isebenza ezimangalisayo ngezitsha zakho. Manje sekulungele ukuchitha isikhathi esimnandi. Futhi ukupheka kuzoba ngesigamu.
Isipheki sokungeniswa asiveli esikhathini esidlule emakethe. Ngakho-ke, asazi okuningi ngakho. Kodwa sekuyisikhathi sokuyilungisa. Kungaphawulwa ukuthi amapuleti anjalo ngentengo adlula amanani kagesi, kodwa kufanelekile. Ungazibona wena.
Manje emakhishi amaningi ahloniphekile okudlela kukhona nje abapheki be-induction. Kusebenza kahle, kulula futhi kulula ukuyisebenzisa. Kungasebenza kumamodeli ahlukahlukene. Futhi ngazibonakalisa indlela engcono kakhulu. Lona ubuchwepheshe bekusasa lethu.
Le cooker induction ihluke ezivuthayo ezivamile zikagesi ezikhethekile. Le ntsha kanye nokusebenza kwayo kugcizelelwe yizindawo zokufakelwa kwamandla kagesi. Ngakho-ke, igama lepuleti liyi-induction.
Uma ufaka ipuleti ye-pan noma ezinye izitsha ezishisayo, izoshisa kuphela indawo lapho izitsha zakho zikhona manje. Ngakho ungafaka isandla esiseduze futhi ngeke ushiswe. Ukuze kusebenze inqubo yokushisa, indawo yezingubo kumele kube ngu-70% we-burner. Kodwa zincane, ngakho ngeke kube khona izinkinga ngalokhu.
Kufanele ngithi amagama ambalwa mayelana nemodi yokuvula. Lo msebenzi uvumela ukuthi udlulisele amandla okushisa owodwa komunye, uma kudingeka. Lokhu kulungile uma udinga ukubilisa amanzi ku-kettle ngokuphuthumayo, kuyilapho omunye epheka isobho. Okusho ukuthi, umsebenzi ungabizwa ngokuthi "umbuso ojulile" ngesikhathi sonke ukushisa kuqondiswa kwesinye sezishisayo. Umbuso ukhona cishe kuwo wonke amamodeli wanamuhla wepulangwe lokungeniswa. Ukukhipha abapheki kagesi banqoba abakhulekeli abaningi.
Kufanelekile ukusho ukuthi ukushisa akuveki ekushiseni, kodwa emgodini ongaphansi opheka kuwo. Izindawo ezisele azifudumali futhi zihlale zibandayo. Uma kungekho izitsha, akukho ukushisa. Kungenzeka ukwenza ukuhlolwa okunjalo okuthakazelisayo. Beka iphepha ephepheni, futhi phezulu kwepani ngamanzi. Ngemuva kokuthi amanzi ashisa, iphepha lakho lizohlala liqinile futhi ngeke lishise.
Luhlobo luni lwezitsha ezizokuthinta?
Sincoma ukusetshenziswa kwezinto ezikhethekile, ezenziwe kusukela ekuphatheni okunezici ezifanele. Kumele ithole amandla ensimu yamagnetic. Yiqiniso, ukwaziswa kwezitsha kungase kungabi yi-ferromagnetic. Kodwa ngale ndlela ungayifinyelela umphumela ophezulu kusuka kushisa. Ngokuyinhloko, insimbi inezici ezinjalo.
Abapheki be-induction bamuva baqaphela ngokushesha isitsha esifanele sokushisa. Ngakho uma kungenjalo, ngeke kube ukushisa. I-ironware ekhishwe ngokugcwele yendabuko inhle. Izitsha ezivela ensimbi engenasinsimbi zensimbi nazo zifanelekile ama-slabs. Into ebaluleke kakhulu ukuthi ngaphansi kwe-glassware kunezingqimba zensimbi ye-ferromagnetic, futhi yini ephakeme ayisabalulekile.
Zonke izinzuzo nezindleko ze-cooker induction
Kufanelekile ukuthola ukuthi kungani umculi we-induction ethola ukuthandwa okunjalo phakathi kwabesifazane besifazane. Yini eheha abantu kakhulu?
Ukuphepha. Uma unabantwana abancane abagijima nxazonke futhi bengakwazi ukuhlala endaweni eyodwa, khona-ke lokhu kuyindawo yokupheka efanelekayo. Esigatsheni esinokubuyiselwa kobuchwepheshe, ungasebenzisi ilangabi elivulekile. Ukudlala, ingane, ukubeka isandla esitofu, ngeke ishise. Konke kwenzeka ngokushisa kuphela izitsha. Lokhu kunciphisa amathuba okushisa. Ukusebenzisa ikhaya laso, ngeke neze ubangele umlilo noma ezinye izinhlekelele. Uma ipuleti ingenayo i-disposables, ngeke ivule. Uma uncike ngokumelene noma uncike ekubhekeni kwepuleti, ngeke ushise, ngisho nalapho isebenza.
Ukuhlanza okulula okulula. Kulula kakhulu ukusula amafutha nosizi. Ungakhathazeki uma kukhona okuphahlazekayo noma okuphambukayo. Kulula kakhulu ukusula futhi ngeke ushiye umkhondo wamafutha. Emva kwakho konke, uma upha okuthile okuthile kwisitofu segesi, khona-ke kuyodingeka ukuthi uhlutshwe nge-detergents akhethekile. Ubuso bebhodi lokungeniswa libushelelezi futhi liluhlaza, ngakho-ke akukho ndawo yokuqoqa lapha. Ngiguqule, futhi kuyoba ehlanzekile.
Imodi yokulungisa amandla. Imodi yokushisa ingashintshwa ngokuzimela, ngakho unikezwe ngokunemba kokushisa okuphezulu. Esigatsheni segesi asisebenzi ngaleyo ndlela. Ubeka izinga lamandla kuphela ngeso, futhi lapha uyazi kahle izinga lokushisa kweplate.
Isilinganiso sokushisa okusheshayo. Ukushisa kwenzeka ngokuphindwe kabili njengokushisa kwegesi. Yenza umfudumalo wezitsha ezifudumele. Ugcina isikhathi esiningi ngesikhathi upheka. Yingakho ezitolo zokudlela bese usebenzisa ama-burner wokungenisa. Isitofu esivamile sikagesi sizobilisa 1 ilitha lamaminithi amaminithi angu-10, ukungeniswa kwemaminithi amathathu. Ingabe kukhona umehluko?
Ezomnotho. Ukupheka kwendawo yokudoba kudinga ukusetshenziswa okungaphezulu kwamandla. Phela, akudingeki ukuba usebenzise amandla ekushisa ukukhanya okukhulu. Amandla asetshenziselwa kuphela insimu yamagnetic ku-coil yokungena. Ukushisa kulawulwa ngokuzenzekelayo yi-system. Itshisa izinga lokushisa lokushisa lokushisa, bese liguquka, futhi liphinde lishintshwe njalo uma kudingeka ukuze kugcinwe izinga lokushisa.
Ukushisa okukhulu. Umsebenzi we-Booster uyadingeka ukuze usakaze amandla phakathi kwama-burners. Ngezinye izikhathi kuyadingeka ukuba ulungiselele ngokushesha umdlali, kusemqoka kuwe, kodwa akudingeki ukuba unqamule okwesibili. Ngakho-ke, ungakwazi ukuboleka amandla amancane kwenye indawo yokushisa.
Izindleko eziphezulu. Ngokuphindwe kabili noma kathathu izindleko zepayipi lokungeniswa likhulu kunesitofu segesi. Futhi ibeka abaningi emcimbini. Idivayisi enjalo ayikwazi ukukhokhela noma ubani.
I-Tableware. Akuzona zonke izitsha ezifanele umpheki. Njengoba sishilo ekuqaleni, izitsha ezingezansi kufanele zibe nezakhiwo ze-ferromagnetic. Futhi ukushisa kagesi negesi kufanelekile noma yikuphi izitsha. Ngezansi kwezitsha, iziphethu ngezinye izikhathi zifafazwa, lokhu kuyisibonakaliso sokuthi kufanelekile. Ngakho izitsha zengilazi ezingenakushisa, izethusi, ithusi, i-aluminium nezinye izinto ezingekho magnetic kufanele zifihleke egunjini, ngoba izitsha ezinjalo ngeke zikuhambisane nawe.
Abapheki be-induction abafakiwe kuma-refrigerator, ama-daishwashers nemishini yokuwasha, phezu kwe-ovini namanye amadivayisi anezinsimbi.
Impi yendawo endaweni ekhishini: umshini wokushisa noma umshini wokuzijabulisa?
Indlela yokukhetha insimbi ekuthini yedwa
Ama-gadget aphezulu kakhulu ekhishi
Inqubo yokudla, okungcono ukuthenga
Iyini inzuzo yokuncelisa amama?
Ubulili Ngosuku Lokuqala: Izinzuzo Nezinkokhelo
Umshado emva kobudlelwano besikhathi esifushane - ingabe uzoletha injabulo?
Izakhiwo zokuphulukisa ze-viburnum amajikijolo
Iqabunga leCowberry njengendlela yokwenza isimangaliso abantu
Imininingwane ye Mozzarella ushizi
Isitayela sokugqoka kusihlwa samantombazane aphelele
Ilayisi nama-shrimps ku-multivark
Kubalulekile ukuqinisa ukuzivikela komzimba
Ungazuza kanjani esimweni esinzima?